> Resource > YouTube > YouTube Trimmer: Sida loo jar YouTube Videos
Hel qaar la yaab leh YouTube videos, oo doonaya in ay jar ka soo baxay qaar ka mid ah ka qeyb aadan u baahnayn? Waxaa jira codsiyo badan oo kaa caawin in ay hoos u jar dherer video ee, oo ay ku jiraan YouTube cusub ee web-ku salaysan video editor heli karo si ay u saxiixay-in dadka isticmaala. Laakiin waxa haddii aad rabto video trimmer universal in la nooc kasta oo files video halkii kaliya clips Uploaded kuu gaar ah ka qaban?
Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) yimaado anfacaya ah oo si sahlan loo isticmaali codsiga tafatirka in aad isticmaali karto si jar iyo Jinka wax kasta video aad ka heli in la abuuro shaqo cusub. Waa barnaamij laablaab, iyo taageerada dhan SD YouTube ama HD video qaab FLV, WebM, HTML5. Hoos waxaa ku qoran ayaa muujinaya sida aad jar karo files YouTube iyo wax kasta oo kale oo files si fudud oo dhaqso.
Fiiro Gaar ah : Tani Cropper YouTube waa cross-madal. Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan la qaato version Mac: Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) oo raac talaabooyinka la mid ah sida belows (Screenshot Windows).
1 Import YouTube videos aad rabto in aad jar
Ka dib marka aad ku rakiban this trimmer YouTube, jiidi aad file YouTube barnaamijka. Waxay ka muuqan doontaa in ay leeg- bidix. Haddii kale, guji "Import" si aad u hesho file YouTube aad rabto in aad jar furmo popup ah. Marka dhammaan faylasha ku raran yihiin, jiididda iyo hoos u video ah oo aad rabto in aad fiiqdo in Timeline Video ah. Ogow in dhammaan faylasha asalka YouTube loo hayn doonaa dhawrsan. Waxa kaliya ee aad jar video YouTube ah iyo in la abuuro file cusub.
Talooyin: Haddii aad u baahan tahay ripper YouTube ah in ay keenaan videos sida aad doonayso inaad u gal wadid aad u adag, isku day in aad taas ku ool ah oo lacag la'aan ah downloader YouTube .
2 jar YouTube video on Timeline
Muujinta video ku saabsan Timeline, iyo jiirka badan si ay bilowgii ama afjaridda dhibic. Marka "arrow Double" muuqataa, jiidi waa in ay soo gaabin ama kordhin clip ah. Si aad u soo celiyo wax iska jaro loox, oo keliya riix "Ctrl Z +" ama guji "burburin lahaayeen" button.
Haddii aad rabto in aad hesho qaybta dhexe ee aad video YouTube, isku day in aad shaqo Split lahayd. Waa mid aad u fudud. Just ciyaaro aad video YouTube, guuraan slider in ay meesha aad doonayso inaad, oo guji "hako". Hadda riix icon Maqasyo ee toolbar si aad isla markiiba u kala qaybiyaan laba qaybood. Ku celceli ilaa aad ka hesho qayb doonayay, ka dibna ku dhuftay "Delete" on keyboard ah in meesha laga saaro dadka kale.
Talooyin: Si lagaaga caawiyo in aad si deg deg ah u hesho clips aad doonayay, taas trimmer YouTube kale oo ay bixisaa a feature Muuqaal Baaritaanka anfacaya. Tani waxay si gaar ah faa'iido maxaa yeelay waxa ay si toos ah u googooyaa goobaha kala duwan, sidaas waxaad ka heli kartaa goobaha aad bartilmaameed aan wax dadaal ah. Si tan loo sameeyo, si fudud xaq guji clip ku saabsan shayga saxaarad bidix iyo dooro "Muuqaal Baaritaanka". Daaqadda muuqata, ku dhacay "ogadaan" soo saaro dhammaan goobaha kala duwan oo guji "codso".
3 Save the video YouTube jaro
Ugu dambeyntii, kaliya riix "Abuur" button inay u dhoofiyaan file YouTube ah. Daaqadda pop-up ka, tag "YouTube" tab, buuxi macluumaadka account, category, horyaalka, sharaxaad, iwm Markaas ka dhacay "Abuur" in ay si toos geliyaan ka codsigan.
Ogsoonow in aad sidoo kale badbaadin karo abuurkiinna si qaab video caadiga ah ama HD sida AVI, wmv, MOV, MP4 in ay ku haboon ciyaari on your computer ama qalabka la qaadi karo. Gubidda jaro YouTube video inay DVD video sidoo kale waa la heli karaa, sida ku cad hoos ku qoran shaashada.
Fiiro Gaar ah: Tani trimmer YouTube kaa caawinaysaa in aad kala qaybsan iyo jar qayb ka mid ah aan la rabin ee aad video asalka ah ee qasabno fudud, laakiin ma abuuri karaan multi-videos. Sidaa darteed, haddii aad jeceshahay in aad jar video weyn si aad u hesho clips yar oo dhowr ah, waa in aad jar oo si gooni gooni ah u hesho mid mid badbaadiyo kasta oo qaybo ka mid iska jaro. Ka sokow video falinjeeerka, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ayaa sidoo kale ku siinaysaa kale video qalab waxtar leh sida ku biirtay, qoqobada, isagoo intaa ku daray saamaynta gaar ah, qabsato dhalaalka, bedelkeeda, codsanaya kala guurka qurux badan u dhexeeya clips, iyo in ka badan. Si naxariis leh tixraac faahfaahin dheeraad ah si ay u Guide User .
Daawo video tutorial this: